Jim McNalis ၏ ဦးဝင်းတင် ပန်းပုရုပ် ပြီးပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
နံနက် အရုဏ်တက်သည်နှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ပြည်လုံးကျွတ် မဲပေးကြပြီ
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၄
ပန်းပုဆရာ ဂျင်မက်နလစ်က သူ့အီးမေးကနေ ပရိသတ်ကို ဓာတ်ပုံများ ရိုကပြီး အကြောင်းကြားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
FINISHED SCULPTURE OF U WIN TIN. Bronze Patina. 12 3/4″ X 8″ X 8″ (Photo – Jam NcNalis)